ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်းဗေဒင်ပညာ (အပိုင်း-2)
၁။ လာရောက်သူသည် ဆရာ၏ ရှေ့မှောက်၌ မည်ကဲ့သို့ နေရာယူထိုင်သည်ကို မှတ်သားရမည်။ မေးသူသည် ဆရာ၏ လက်ျာဘက်မှ ထိုင်ခြင်း၊ လက်ဝဲဘက်မှ ထိုင်ခြင်း၊ အလယ်တည့်တည့်မှ ထိုင်ခြင်းတို့ကို မှတ်သားရမည်။ ယတြာပြုခြင်း အကောင်းအဆိုး အဟောထုတ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည်။
၂။ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ခြင်း၊ ရာဇထိုင်ထိုင်ခြင်း၊ ကြုံ့ကြုံ့ထိုင်ခြင်း၊ ဒူးတစ်ဖက်ထောင် တစ်ဖက်လှဲထိုင်ခြင်း၊ ရော့တိရော့ရဲ ခြေဆင်းခြေဆန့် ခြေပိုက်လက်ပိုက်ထိုင်ခြင်းတို့ကို တွဲဖက်၍ မှတ်သားရမည်။
၃။ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နာမည် စသည်တို့ကို မေးစဉ် ကြားရသော တဘောင်၊ မေးသူ၏ လှုပ်ရှားမှု အမူအရာများကို မှတ်သားရမည်။
၄။ လာရောက်သော နေ့ကို ကံနိမိတ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်သားရမည်။ ရောက်လာသော အချိန်ကိုလည်း တိတိကျကျ မှတ်သားရမည်။
၅။ မွေးသက္ကရာဇ် ရက်၊ လများကို စတင်တွက်ချက်၍ ရသော ကိန်းများကို ပြည့်စုံစွာ ရေးသားစီစဉ်ပြီးလျှင် ဆရာ့ဘက်မှ ပြုဘွယ်ကိစ္စများ ပြည့်စုံပြီးဖြစ်၍ စတင်ဟောပြောရန် ဖြစ်ပြီဟု ဆိုရပါမည်။
ဆရာ၏ရှေ့မှောက်၌ ဆရာ၏ ၀ဲယာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် နေရာယူထိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဝဲဘက်သို့ ယိမ်းယိုင်၍ ထိုင်လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ထိုသူသည် အနိဋ္ဌ အားသာနေ၏၊(၀ါ) ဆိုးအားသာနေ၏။ ထိုသူ အရေးထား၍ သိချင်နေသော ကိစ္စသည် အဆိုးဖြစ်၏။ ထိုသို့ အဆိုးအတွက် စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ဗေဒင်မေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဥပမာ . . .
Ø အလုပ်မှ အရေးယူခံထားရသူက အလုပ်အတွက် စိုးရိမ်၍ ရာထူးကျမလား . . .
Ø အိမ်မှ ဆင်းပေးရတော့မလား . . .
Ø အမှုရှုံးမလား၊ ရှုံးလျှင် ထောင်ဒါဏ် ငွေဒါဏ် ခံရမှာလား . . .
Ø ငွေပစ္စည်း စသည် ပေးလိုက်သူမှာ လိမ်ကောက်သွားပလား . . .
Ø နေမကောင်းသူ အသက်ချမ်းသာပါ့မလား . . .
Ø ခရီးသွားသူ ပြန်လာပါ့မလား။ ဘေးတွေ့နေလား . . .
Ø အိမ်ထောင်ကွဲမလား။ ပျက်မလား . . .
Ø ကုန်ရှုံးမလား . . .
စသည့် အဆိုး (အနိဋ္ဌ) ကို အလိုမရှိသောကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ဗေဒင်မေးလာသူ တစ်ဦး ဖြစ်လေသည်။ အနိဋ္ဌဘက်သို့ ဦးစားပေး၍ သိချင်နေသည်။ ဤအချက်များမှာ မေးသူ၏ စိတ်၌ ပဓာန မဟုတ်ပါ။ ဤတွင် ကိန်းပုံများကို ကြည့်၍ အထွက်အပျက် (အနိဋ္ဌ) အကြောင်းနိမိတ်၊ အနိဋ္ဌ အကျိုးတို့ကို ရွေးချယ်၍ ဟောပြောရမည်။ (ဥပဒေသ)
ဆရာ၏ ရှေ့တည့်တည့် တူရူမှ ထိုင်၍ မေးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့တည့်တည့်တွင် မတ်တပ်ထိုင်လျက် မေးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ (ဣဋ္ဌနှင့် အနိဋ္ဌ) အား မျှတသူ ဖြစ်၏။ ထိုသူ၏ စိတ်၌ ဗေဒင်မေးရခြင်း အကြောင်းသည် စုံစမ်းရန်နှင့် ကြိုတင်သိထားချင်သော အရာများအတွက် မျှတသောစိတ်ဖြင့် အကောင်းရော အဆိုးပါ ပါဝင်နေမည် ဖြစ်ပါ၏။
၎င်းဦးစားပေး သိချင်နေသော ကိစ္စများမှာ ရည်ရွယ်ချက်များ ထစ်ငေါ့နေခြင်း၊ ကောင်းဆိုးအဖြေ မပေါ်သေးခြင်း၊ ရှေ့ဆက်ရမလား၊ ဆုတ်ရမလား၊ ကောင်းမလား၊ ဆိုးမလား နှစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်သည်။
Ø လုပ်ထားသောလုပ်ငန်း တိုတက်လာနိုင်၊ မလာနိုင် . . .
Ø အလုပ်လျှောက်ထားတာ ရပါ့မလား . . .
Ø လက်ထပ်ဘို့ စီစဉ်ထားတာ အောင်မြင်ပါ့မလား . . .
Ø အလှူအတန်းလုပ်ချင်တာ အထမြောက်ပါ့မလား . . .
Ø ငွေချေးထားတာ ရနိုင်ပါ့မလား . . .
ဟူသော ကောင်းဆိုး ဘယ်ညာ ချိန်ခွင်ကဲ့သို့ ယိမ်းယိုင်နေသောကြောင့် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းဟု သိမှတ်ရမည်။
ဆရာ၏ လက်ျာဘက်မှ နေရာယူထိုင်လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ဆရာ၏ လက်ျာဘက်ဆီသို့ ယိမ်းယိုင်ပြီး ထိုင်လျှင်သော် လည်းကောင်း၊ ထိုသူအလေးထား သိချင်နေသော ကိစ္စသည် (ကောင်းစားမှာ၊ တိုးတက်မှာ၊ အောင်မြင်မှာ၊ လာဘ်ရမှာ .. ရပါ့မလား) ဟုဝမ်းသာ စိတ်ချလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်၏။
Ø အိမ်တိုက်ကား စသည် ရဘို့ ၀င်ဘို့ ကိစ္စ
Ø နိုင်ငံခြား သွားရမလား
Ø ဆုလာဘ် ဂုဏ်ထူး ရပါ့မလား
ငွေဝင်ဘို့ကိစ္စ ၀င်ပါ့မလား . . . ဟူသော အကောင်း (ဣဋ္ဌ) ဘက်မှ စိတ်မောနေ၍ သေချာစိတ်ချရန် သိချင်၍ မေးလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိထားရပါမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဤအထိုင် (၃)ပါးကို ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ရာ၌ ဣဋ္ဌ အနိဋ္ဌ တို့ကို ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဗေဒင်မေးသူက အထက်ပါတို့မှလွဲ၍ အပြန်အားဖြင့် မေးခဲ့သော် လက်ဝဲဘက်မှ ထိုင်သော်လည်း “ရာထူးတိုးမလား” “နိုင်ငံခြားသွားရဘို့ မြင်သလား” “ကားဝယ်ဖြစ်ပါ့မလား” အစရှိသော (ဣဋ္ဌ) အမေးများကို မေးခဲ့သော် (အနိဋ္ဌ) အဖြေအဖြစ် “ရာထူးတိုးဖို့တွင် အနှောင့်အယှက်ပေါ်မည်” “ကားဝယ်ယူလျှင် အရှုပ်အရှင်းပေါ်လာမည်” ဟူသော အဟောသာ ဧကန် ဟောရပါမည်။ ထူထားသော ကိန်းများတွင် အကောင်း အ၀င်အထွက် တွေ့သော်မှ ဆန်းမ၀င်တော့ သဖြင့် ပျက်ပြားသွားရပေသည်။ အထွက်၊ အပျက်ဌာနများမှ ဆန်းမ၀င်သော အကြောင်းတို့ ၀င်လာခံစားရသဖြင့် မကောင်း အနိဋ္ဌ အပျက်တို့သာ ဟောရလေတော့သည်။
ထို့နည်းအတူ လက်ျာဘက်မှ ထိုင်သော်လည်း “ငွေလိမ်ခံရမလား” “ရာထူးကျဖို့ ရှိသလား” ဟူသော အမေးမျိုးကို မေးလာခဲ့သော် “လိမ်ပြီးသွားသော်လည်း ပြန်ရမည်” “ရာထူးကျဖို့ပေါ်သော်လည်း အလိုလို ကူညီသူပေါ်လာပြီး ပြေပျောက်သွားမည်” ဟူ၍သာ ဧကန် ဟောရာ၏။
သူ၏ မူလတိုင်တွင် ကောင်းဌာနရှိ ဣဋ္ဌဂြိုဟ်များ ဆန်းဝင်သော နိမိတ်များ အဖြစ်များသောကြောင်း အဆိုး အနိဋ္ဌများ ပြေပျောက်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဗေဒင်မေးသူ၏ အထိုင်သည်လည်း ဆန်းကျင်ခြင်း ဆန်းဝင်ခြင်း ဖြင့်သာလျှင် အဖြေပေး ဆုံးဖြတ် ဟောပြောရပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်မှာ နိမိတ်ပုံများ ဖြစ်သည့် ဣဋ္ဌထိုင် အနိဋ္ဌထိုင်များသာ အရေးကြီးပါသည်။ ကိန်းခန်းနှင့် ဂြိုဟ်များမှာ သဘာဝဖြစ်၍ ကံနှင့် မပတ်သက်ပါ။ နိမိတ် တဘောင်တို့သည် ကံနှင့် ပတ်သက်သဖြင့် ကိန်းကို ပယ်နိုင်သော အကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကိန်းသည် ရှောင်၍ရသည်။ ဆောင်၍ ရသည်။ (ရှောင်ချင်ရှောင် ဆောင်ချင်ဆောင် မိမိသဘောမျှသာ ဖြစ်သည်) ဤရောဂါ ဝေဒနာသည် ဤအစာဖြင့် မတည့်ဟူသည်မှာ သဘာဝဖြစ်သည်။ ရှောင်ချင်ရှောင် စားချင်စား၊ ရှောင်လျှင် အနာမတိုး၊ စားလျှင် အနာတိုးမည်မှာ သဘာဝဓါတ်များ၏ သဘောမှန်သာ ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် ကံက စီရင်သော အနာများဖြစ်လျှင် ရှောင်၍ ဆောင်၍ အချီးနှီးသာဖြစ်ရာ ကိန်းကိုပယ်နိုင် ဖောက်နိုင်လေသည်။ ကိန်းနှင့် ကံကိုခွဲ၍ထားသော ပညာကြီးဖြစ်၍ ကွဲပြားမှ သဘောပိုင်မှ အရသာရှိရှိ တတ်မြောက်ပါလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အထိုင်(၃)မျိုးအတိုင်းပင် ဣဋ္ဌနှင့် အနိဋ္ဌ နိမိတ်အဆုံးအဖြတ်ကို လက်(၃)ချောင်းကို ဆွဲခိုင်းသော နည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပေသည်။
သိလိုစိတ်ပြင်းပြနေသူတစ်ဦးအား အကြောင်းအရာ တစ်မျိုးအတွက် ဆရာဖြစ်သူ၏ လက်(၃)ချောင်းကို စူးစူးစိုက်စိုက် အာရုံထား၍ အဆွဲခိုင်းရပါသည်။ ဆရာ၏ လက်ျာလက် (လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ်၊ လက်သူကြွယ်) ၃ ချောင်းကို မှောက်ရက် အနေအထားအတိုင်း ဓိဌာန်၍ ဆွဲစေရပါသည်။ ဤတွင် ဆွဲသူသည် (လက်ညှိုး)ကို ဆွဲလျှင် အထိုင်တုန်းက လက်ဝဲနှင့် တစ်သဘောတည်း ဖြစ်လေသည်။ (လက်ခလယ်)သည် အထစ်အငေါ့၊ ကြန့်ကြာမှု၊ မရရာမှု၊ (လက်သူကြွယ်)သည် လက်ျာနှင့် သဘောချင်းတူသဖြင့် အကောင်းအဆိုးကို ဆုံးဖြတ် ဟောပြောရလေသည်။
“ထောင်ကျမလား” ဟုမေး၍ လက်ကို ဆွဲသောအခါ (လက်ညှိုး) ကို ဆွဲမိလျှင် “ကျမည်ဧကန်” (လက်ခလယ်)ကို ဆွဲမိလျှင် “ထစ်ငေါ့ပြီးမှ ကြန့်ကြာပြီးမှ လွတ်မည်” (လက်သူကြွယ်)ကို ဆွဲမိလျှင် “ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မည် ဧကန်” ဖြစ်တော့သည်။
အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် ဆရာသည် ငါးပါးသီလခံယူထားခြင်း၊ ရတနာသုံးပါး မပြတ်ကိုင်းရှိုင်းသူ ဖြစ်ခြင်း၊ သစ္စာ အဓိဌာန်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်းတို့ ရှိပါမှ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ကန်လေသည်။
(က) တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်လျှင် - အကြံအစည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် နှောင့်ယှက်သူပေါ်၍၊ ထိခိုက်နစ်နာနေ၍၊ စိတ်ဆင်းရဲ၍ ဗေဒင်လာမေးသူ ဖြစ်မည်။
(ခ) ရာဇထိုင်ချိတ်၍ထိုင်လျှင် - အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲဖြစ်ရ၍၊ ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျသူများက တိုက်ခိုက်နှောင့်ရှက်၍၊ အစိုးရအမှုအခင်းတစ်ခုခု ကြုံတွေ့ရ၍ ဗေဒင်မေးလာသူ ဖြစ်မည်။
(ဂ) ကြုံ့ကြုံ့ထိုင်လျှင် - မိတ်ဆွေတို့နှင့် ရန်ကြုံ၍ အကြံအစည်ပျက်၍ ဗေဒင်လာမေးသူ ဖြစ်မည်။
(ဃ) ဒူးတဖက်ထောင်တဖက်လှဲထိုင် - အပြောင်းအရွေ့ လှုပ်ရှားရွေ့လျားခြင်းအတွက် ဗေဒင်လာမေးသူ ဖြစ်မည်။
(င) ရော့တိရော့ရဲ ခြေဆင်းခြင်း၊ ခြေကိုပိုက်ခြင်း၊ လက်ပိုက်ခြင်း - အိမ်တွင်းရေးအပူသင့်၍၊ ပြဿနာပေါ်၍၊ အခြေအနေဆိုးများ ပေါ်ပေါက်လာ၍၊ အိမ်ထောင်ပြောင်းလို၍ အလုပ်အကိုင်မဲ့၍ အကြံဥာဏ်ကုန်နေ၍ ဗေဒင်လာမေးသူ ဖြစ်မည်။
(က) တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်လျှင် - နဂိုအခြေအနေထက် တိုးတက်လာသူ၊ စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်လို၍ စီးပွားရေးရာထူး မြဲမမြဲ သိလို၍ မေးလာသူ ဖြစ်မည်။
(ခ) ရာဇထိုင်ချိတ်၍ထိုင်လျှင် - အခြေအနေ တိုးတက်အောင်မြင်လာသူ၊ ထို့ထက်ပို၍ အောင်မြင်ရန် ရှိသေးလားဟု မေးလာသူ၊ ၎င်း၏ ဘေးရန်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်လို၍ မေးလာသူ ဖြစ်မည်။
(ဂ) ကြုံ့ကြုံ့ထိုင်လျှင် - ကောင်းမှုပြုလို၍ လာမေးသူ၊ အပေါင်းအဖော် မိတ်ဆွေတို့အတွက် လာမေးသူ ဖြစ်သည်။
(ဃ) ဒူးတဖက်ထောင်တဖက်လှဲထိုင် - ကူးသန်းသွားလာ လုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်သည်။ အသွားအလာ အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ကူးသန်းရမည့် ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို သိလို၍ လာမေးသူ ဖြစ်မည်။
(င) ရော့တိရော့ရဲ ခြေဆင်းခြင်း၊ ခြေကိုပိုက်ခြင်း၊ လက်ပိုက်ခြင်း - အိမ်ထောင်ရေး အပူသင့်လာသူ၊ အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာသူ၊ အလုပ်အကိုင် ပျက်စီးထိခိုက်၍ ဗေဒင်မေးလာသူ ဖြစ်မည်။
(က) တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်လျှင် - အခြေအနေများ၊ အကြံအစည်များ တိုးချဲ့လို၍ ဗေဒင်မေးလာသူ၊ ယခုအခါမှ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်လျက်ရှိသည့်သူ ဖြစ်မည်။
(ခ) ရာဇထိုင်ချိတ်၍ထိုင်လျှင် - ရာထူးဂုဏ်ရှိန် တိုးတက်လို၍ မေးလာသူ၊ တန်ခိုးသြဇာ ပိုမိုကြီးလို၍ မေးလာသူ ဖြစ်မည်။
(ဂ) ကြုံ့ကြုံ့ထိုင်လျှင် - အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလို၍ မေးလာသူ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် စိုးရိမ်မကင်း၍ မေးလာသူဖြစ်မည်။
(ဃ) ဒူးတဖက်ထောင်တဖက်လှဲထိုင် - ခရီးသွားလို၍၊ လုပ်ငန်းနေအိမ်ပြောင်းလဲလို၍ မေးလာသူဖြစ်မည်။
(င) ရော့တိရော့ရဲ ခြေဆင်းခြင်း၊ ခြေကိုပိုက်ခြင်း၊ လက်ပိုက်ခြင်း - အိမ်ထောင်ရေး အတွက် ကြောင့်ကျပူပန်မှုဖြင့် မေးလာသူ၊ စီးပွားနှင့် အိမ်ထောင်အတွက် မေးလာသူ ဖြစ်မည်။
အတိတ် နိမိတ်နှင့် တဘောင်များ
ဗေဒင်လာမေးသူ၏ အသက် နှစ် လ စသည်တို့ကို မသိရခင်ကပင် မေးသူ၏ ကံနိမိတ်က ပြသနေသော နိမိတ်များသည် ဗေဒင်ဟောသူ ဆရာတို့အတွက် ပို၍ပင် အရေးကြီးလှပါသည်။ မိမိရှေ့ရေးဘ၀တွင် အရေးကြီးသော ကံကြမ္မာ အဆုံးအဖြတ်အတွက် သိချင်စိတ်ဇောအပြည့်ဖြင့် ရောက်လာသူတိုင်းတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော နိမိတ် တဘောင်များသည် ထင်ထင်ရှားရှား ပေးလာမြဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဗေဒင်မေးသူက သိချင်သော အရေးကြီးကိစ္စပါလာ၍ အမေးကို ဖြေဆိုဆုံးဖြတ်ရခြင်းသည် ပိုမိုလွယ်ကူ၏။ သိချင်သော အရေးကြီး ကိစ္စပါမလာသူတို့မှာ တခါတရံ နိမိတ်ထူးများ ပေါ်ပေါက်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရ၍ ဆရာက ဆုံးဖြတ်ဟောပြောမှုကို ကြိုတင်ဟောပြောနိုင်၏။ ဤကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်နေသူများ မဟုတ်လျှင်မူကား ဆန်းဗေဒင်၏ ကိန်းခန်း အတိုင်းသာလျှင် ဟောပြောရလေတော့သည်။ ထိုသူတို့မှာ ဆရာ၏ အကြံဥာဏ်ကို အလိုရှိသောကြောင့် လာရောက်တိုင်ပင် တောင်းခံရန် လာခြင်းမျှသာ ဖြစ်လေသည်။
၁။ ဗေဒင်မေးသူသည် ရယ်မောလျက်မေးခြင်း၊ မေးစဉ် ရယ်မောသံကို ကြားရခြင်းသည် မေးသူ ခရီးသွားရမည်။ ရေကြောင်းခရီးသွားလျှင် အန္တရာယ်တွေ့မည်။ ခွေး၊ မြွေ၊ ကင်း၊ ပျား စသည် အဆိပ်ရှိသော သတ္တ၀ါများလည်း အကိုက်ခံရတတ်သည်။
၂။ ဒူးပေါ်မှာ လက်တင်၍ မေးမြန်းလာမူ စနေသမီးနှင့် စကားများရလိမ့်မည်။ တနင်္လာနှင့် စနေသမီးတို့ကြောင့် အရှက်ရ အကျိုးယုတ်လိမ့်မည်။
၃။ နားကိုဆွဲကိုင်ရင်း မေးမြန်းခဲ့ပါမူ စနေနှင့် ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲ အနှောင့်အယှက် ကြုံလိမ့်မည်။
၄။ နဖူးကို စမ်း၍ မေးပါက အစွဲတစ်ခုခုရှိသည်။ ရိုးရာစွဲ ရှိလိမ့်မည်။
၅။ မေးကိုထောက်လျက် မေးပါက အိမ်တွင်းမှာ ခရီးသွားသူရှိသည်။ မေးသူသည် အမြင့်မှ မတော်တဆ လဲကျခဲ့သည်။
၆။ နှာခေါင်းကို ကိုင်ရင်းမေးပါက ခရီးသွားသူ တစ်ဦးဦးအတွက် ဗေဒင်လာမေးခြင်း ဖြစ်သည်။ မေးသူသည်လည်း စိတ်နှလုံး မသာမယာရှိသည်။
၇။ နှာခေါင်းကို ဆိပ်၍ မေးမြန်းပါက ထိုသူ၏အိမ်၌ ရောဂါသည် လူနာရှိသည်။ မရှိလျှင် လာလိမ့်မည်။
၈။ ပါးစပ်ကို တစ်စုံတစ်ရာနှင့် သုတ်၍ မေးပါက တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် တရားတဘောင် ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ စကားများရကိန်း ရှိသည်။
၉။ အထက်နှုတ်ခမ်း၊ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဆိတ်၍ မေးပါက ငွေကြေး ကုန်ကျဖို့ ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် စိတ်ဆိုးရလိမ့်မည်။
၁၀။ သွားကြားကို တစ်စုံတစ်ရာနှင့် ထိုးလျှက် မေးပါက ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ အပျိုလူပျို အစစ်မဟုတ်၊ အိမ်ထောင်ကြီးရှိသူနှင့် ပေါင်းဖက်နေရသူ ဖြစ်သည်။
၁၁။ မျက်စိကို သုတ်၊ နှပ်ညှစ်လျက်ဖြစ်စေ မေးပါက ၁၀ ရက်အတွင်း လောလောဆယ် ခြေနှစ်ချောင်း ထွက်ကိန်းရှိသည်။
ဎ၂။ ခေါင်းကို ငဲ့စောင်းလျှက် လက်ကိုထောက်လျှက် မေးပါက လက်ရှိအဆင့်အတန်းက ကျလျှောဖို့ အကြောင်းရှိသည်။
၁၃။ ဆံထုံးကို မေးဆဲကာလ ပြင်ဆင်ကိုင်တွယ်သည်ကို တွေ့ရပါက အိမ်ထောင်ဆက်၊ ရီးစားဆက် ၂ကြိမ်၊ ၃ကြိမ် ရှိသည်။
၁၄။ ဆံပင်ကို ဆွဲသပ်လျှက် မေးပါက အကြီးအကဲနှိပ်စက်မည်။ အမှုအခင်းလည်း မြင်သည်။
၁၅။ ဗေဒင်မေးစဉ် တစ်ဦးဦးက ထိုင်လျှက်မှ အိပ်လျှက်အနေအထားသို့ ပြောင်းခြင်းကို တွေ့ရလျှင် မေးသူသည် အိမ်ယာပြုမည့် အကြံအစည်ရှိသည်။ ခရီးလည်းရှိသည်။ (နာရေးမေးသော် မလွတ်)
၁၆။ လည်ချောင်းကို စမ်းလျက်မေးပါက အိမ်ထောင်ပျက်ခဲ့ရမည်။ အပျိုလူပျိုဖြစ်သော် ရီးစား နှစ်ယောက် သုံးယောက်ရှိပြီး တဏှာကိစ္စ တိတ်တဆိတ် ကြံစည်ခဲ့သည်။
၁၇။ မျက်နှာကို ပ၀ါ၊ လက်ကိုင်ပ၀ါ တစ်ခုခုနှင့်သုတ်၍ ဖြစ်စေ၊ လက်ဝါးကို သုတ်၍ဖြစ်စေ မေးခဲ့သော် ခြေနှစ်ချောင်း ၀င်လာမည်။ အပျိုလူပျိုဖြစ်လျှင် မင်္ဂလာပြုရတော့မည်။
၁၈။ မေးစဉ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်သည့် နိမိတ်ကို တွေ့သော် ခရီးသွားရန်မြင်သည်။
၁၉။ မိန်းမထိုင်ထိုင်၍ ခြေထောက်ကို ကိုင်ကာမေးသော် ခရီးမှ ပြန်ခဲ့ပြီ။
၂၀။ မိမိလက်ကို မိမိဆွဲ၍ မေးပါက အစွပ်အစွဲ ခံရလိမ့်မည်။
၂၁။ လက်ကိုယှက်၍ မေးခဲ့ပါက မိမိကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သားသမီးကြောင့်ဖြစ်စေ အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲ ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
၂၂။ လက်ထိပ်ကို ဆိပ်၍ မေးပါက အဆိပ်ရှိသော သတ္တ၀ါ ကိုက်ခဲခံရလိမ့်မည်။
၂၃။ ဒါး၊ ဒုတ် တခုခုနိမိတ် တဘောင်ကို တွေ့ရ ကြားရပါက မေးသူအိမ်တွင် နာတာရှည် လူမမာရှိသည်။ အိမ် နှစ်ခါ သုံးခါ ပြောင်းရွှေ့ရလိမ့်မည်။
၂၄။ ခရီးနှင့်ပတ်သက်၍ မေးရာတွင်ဖြစ်စေ၊ အပြောင်းအရွှေ့ မေးရာတွင် ဖြစ်စေ တင်ပလ္လင်ခွေ၍ မေးသော် မသွားဖြစ်။ မလာနိုင်။ မပြောင်းရွှေ့ရသေး။
၂၅။ ဗေဒင်မေးသူဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ဦးဦးက ဖြစ်စေ ဟိုမှသည် ဂဏာမငြိမ် ရွှေ့ပြောင်းလှုပ်ရှားပါက သူသည် အိမ်ခြေယာခြေ အတည်တကျမရှိသေး။ အိမ်ပြောင်းရန် အကြံအစည် ရှိသည်။
၂၆။ ထိုင်နေသော နေရာမှ နောက်သို့ အနည်းငယ်ဆုတ်၍ ထိုင်ပြီးမေးပါက ကြီးသူအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရခြင်း။ ကြီးသူက နှင်ချ နှင်ထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်မည်။
၂၇။ ညာဘက်တင်ပါးကို စမ်း၍ မေးပါက ယောက်ျားဖြစ်လျှင် ဥစ္စာပျောက်အံ့။ မိန်းမဖြစ်လျှင် ခင်ပွန်းလင် ရအံ့။
၂၈။ ၀ဲဘက်တင်ပါးကို စမ်း၍ မေးပါက ယောက်ျား ဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ ခင်ပွန်းရအံ့။
၂၉။ ညာဘက်ပေါင်ကို စမ်း၍ မေးပါက အခြေနှစ်ချောင်း ယောက်ျားဝင်လာမည်။ တိုးလာမည်။
၃၀။ လက်ဝဲပေါင်ကို စမ်း၍ မေးပါက အခြေနှစ်ချောင်း မိန်းမငယ် ၀င်လာမည်။
၃၁။ ညာလက်ညှိုး၊ လက်မများကို ဆုတ်လျှက် မေးပါက အိမ်မှာ နာတာရှည် သူငယ်ရှိသည်။
၃၂။ ရှိခိုးသည့် နိမိတ် တဘောင်များကို တွေ့ရသော် သားချင်း တစ်ကျိပ်ကျော်ရှိသည်။ လူနာအတွက် မေးသော် ပြင်းထန်စွာ ခံရမည်။
၃၃။ ညာဒူးကိုထောင် ဘယ်ဒူးကိုလှဲ၊ ညာဒူးပေါ် လက်တင်လျှက်မေးသော် အခြေအနေ အနိမ့်မှ အမြင့်သို့ ရောက်တော့မည်။
၃၄။ နောက်ကို လက်ထောက်၍ မေးသော် အမြင့်မှ အနိမ့်သို့ လျှောကျခဲ့သည်။ ကျတော့မည်။
၃၅။ ခြေကို ဆိတ်၍မေးသော် အဆိပ်ရှိသတ္တ၀ါ ကိုက်ခဲမည်။ အထူးသတိပြုလေ။
၃၆။ တတောင်ဆစ်ကို စမ်း၍ မေးပါက သတ်မှု၊ ဖြတ်မှု၊ ရန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှုအခင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
၃၇။ လက်ဝါးနှစ်ဖက် ထပ်လျှက် မေးပါက မင်္ဂလာဆောင်မှု ပြုရတော့မည်။
၃၈။ ချိုင်းကို မ၍ မေးပါက ကြီးစွာ ဥပါဒ်ရောက်တော့မည်။
၃၉။ အလျားမှောက်သော နိမိတ်ကို တွေ့ရပါက အကြံအစည် မအောင်မြင်၊ အပျက်အစီး အဆုံးအရှုံးများသည်။
၄၀။ ခြေဆင်းသော နိမိတ်ကို တွေ့ရပါက အသက်တိုလိမ့်မည်။
၄၁။ ခြေကိုလိမ်နေသည့် နိမိတ်ကို တွေ့ရပါက အချုပ်အနှောင် ခံရလိမ့်မည်။
၄၂။ လက်မကို ဆွဲ၍ မေးပါက သူတစ်ထူးက မစလိမ့်မည်။ လူအိုများ မုဆိုးမများနှင့် စကားပြောရလိမ့်မည်။ အပျိုဖြစ်လျှင် မုဆိုးမ သားသမီးနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ အကြံအစည် ရှိသည်။ သို့သော် အမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
၄၃။ လက်ညှိုးကို ဆွဲလျှက် မေးပါက အမှုအခင်း ဖြစ်မည်။
၄၄။ လက်ခလယ်ကို ဆွဲလျှက် မေးပါက အကြံအစည် ချွတ်ချော်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရှေ့အဖို့မှာ သင့်တော်မည်။
၄၅။ လက်သူကြွယ်ကို ဆွဲ၍ မေးပါက လာဘ်ကောင်း စုတ်ကောင်း ရတော့မည်။
၄၆။ လက်သန်းကို ဆွဲလျှက် မေးပါက ငယ်သူနှင့် စကားပြောရန် ရှိသည်။
အထက်ပါ နိမိတ်တဘောင်များသည်ကား ပညာရှိ ဆရာတော်ကြီးများ အစဉ်အဆက် အမှတ်အသားထားပြီး သောပြောခဲ့သော နိမိတ် တဘောင် အဟောအယူအဆများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး ဗေဒင်မေးသူ၌ သိလိုစိတ်ဇော ပြင်းစွာရှိလျှင် ဆရာက ၎င်း၏အမေးကို စူးစမ်း၍ ထိုခဏ၌ ထူးခြားစွာ ပေါ်လွင်သော နိမိတ်တဘောင်များကို ခံယူပြီး ဟောပြောနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အာရုံခံယူရာ၌ ကြားရသော တဘောင် (၀ါ) အကြားအသံများနှင့် တွေ့မြင်ရသော နိမိတ်ပုံများမှာ မိမိ၏ အာရုံ၌ (ဣဋ္ဌ) (အနိဋ္ဌ) ခွဲခြား ခံစားရပါမှသာ အဟောထုတ်တိုင်း မှန်ပါသည်။
“ဗေဒင်ဆရာဆိုတာ ကိန်းလောက်တတ်ရုံနဲ့ ဘယ်တော့မှ မကျော်ကြားဘူး၊ ကံကို မြင်နိုင်အောင် သစ္စာ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ့ ပြည့်စုံရတယ်၊ ဒီတော့မှ အတိတ် နိမိတ် တဘောင် စနည်းတွေကို မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်း အာရုံခံ ဟောပြောနိုင်တယ်” (ဦးလွှမ်းမိုဃ်း၏ မိန့်မှာချက်)
ဗေဒင် မေးလာသူ ရောက်ရှိပြီး နေရာယူ ထိုင်သည့်အချိန်နှင့် ဗေဒင်မေးသည့်နေ့သည် ဗေဒင်ဟောပြောရာတွင် အဆုံးအဖြတ်ကဏ္ဍ၌ အရေးပါ အရာရောက်လေသည်။
ဗေဒင်မေးသည့်နေ့သည် မွေးနေ့ မွေးနံကဲ့သို့ အရေးကြီး ပါသည်။ ဗေဒင်မေးသူမှာ အကြောင်းကြီးငယ် လောလောဆယ် ပေါ်ပေါက်နေပါက (မေးနေ့ မေးချိန်)သည် ယင်းပစ္စက္ခ အကြောင်းကြီးငယ်အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးရာတွင် အရေးပါလေသည်။
မွေးနေ့ မွေးလ မသိသူများ ဗေဒင်မေးလာပါက ၎င်းမေးနေ့သည် ဂြိုစ်စားတိုင်ကဲ့သို့ထူပြီး မေးချိန်ကို သက်ရောက်တိုင်ကဲ့သို့ ထူပြီး ဟောပြောရလေသည်။
ဆက်ရန် . . .
Posted by aha at 2:11 AM